Izinketho ezinhle kakhulu zokubhukuda nge-snorkeling nokudilika ePuerto Rico | Izindaba Zokuhamba
Izinketho ezinhle kakhulu zokubhukuda nge-snorkeling nokudilika ePuerto Rico
Uma ucabanga ukuchitha iholide ku- E-Puerto Rico, lapho-ke sincoma ukuthi ungayeki ukwenza ukubhukuda ngesikebhe nokuntywila.
La Isiqhingi saseMona Itholakala ogwini olusentshonalanga yePuerto Rico futhi inikela ngamathuba amahle kakhulu we-snorkeling. Imifula kule ndawo iyikhaya lezinhlobonhlobo zezinhlanzi, octopus, imisebe nezinhlanzi ezincanyana; kumane nje kuyizinhlanzi eziningi kakhulu ePuerto Rico. Kufanele ulethe eyakho imishini yokuthwebula i-snorking esiqhingini, ngoba azikho izindawo zokuqasha kuwo.
Ngasogwini lwe Ponce, Ibhokisi elifile iyindawo engcono kakhulu yokwenza snorkeling. Lesi siqhingi sathola igama laso kumbhali wekhulu le-XNUMX, owabona ukuthi ukuma kwalesi siqhingi kwakufana nokwesidumbu esifubeni. Eminyakeni edlule, kwavela izinganekwane ezahlukahlukene maqondana nalesi siqhingi, kufaka phakathi izinganekwane ze-necrophilia kanye ne-pirates.
Isiqhingi se-Adventure Kuzokusa kule ndawo ekude usuku lonke ukuze ujabulele izimangaliso ze-snorkeling. Ngakolunye uhlangothi, sinefayela le- Ibhishi Fajardo Escondido y Ububanzi, etholakala ogwini olusempumalanga yePuerto Rico. Amanzi alo acwebile ogwini angenye yezinto ezinhle kakhulu zokuthwebula i-snorkeling. Ibhishi elihle kakhulu kule ndawo yiPlaya Escondido; kodwa-ke, isiphephelo sezilwane zasendle esiphelele kunazo zonke siseLa Cordillera futhi sithakazelisa nakakhulu.
Asikwazi ukwehluleka ukuncoma ifayili le- Ibhishi i-Esperanzae Vieques, ikakhulukazi isayithi eliphambi kwe- Indlu yezivakashi yaseTradewinds. Kule ndawo, bazokunikeza izithombe ezinhle kakhulu ukuze ugcine uzijabulisa. Kufanele wazi ukuthi izinga lokushisa lamanzi ePuerto Rico lipholile, lihlala unyaka wonke cishe kuma-degree angama-81 Fahrenheit. Ukubonakala ngaphansi kwamanzi kucace bha kusuka kumamitha acishe abe ngu-60 kuye kwangama-75 ukusuka ogwini futhi uma uqhubeka kancane, uzokwazi ukubona kuze kube ngamamitha ayi-100 noma ngaphezulu ngaphezulu ekujuleni kwamanzi acwebile e-crystal asePuerto Rico.
Ngokufanayo, izindawo ezinhle kakhulu zokutshuza zitholakala eziqhingini ezisogwini oluseningizimu, empumalanga nasentshonalanga. Uzothola uchungechunge lweziqhingi ezincane ezizokusa Culebra. Uma, ngakolunye uhlangothi, uya eningizimu-mpumalanga, ungacwila eHumaco.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Izinketho ezinhle kakhulu zokubhukuda nge-snorkeling nokudilika ePuerto Rico